Olee otú yiri iPhone ihuenyo na TV | Nzukọ Ekwentị
N'ezie, ọtụtụ n'ime unu etinyewo onwe gị n'ihu Mac ma jisie ike oyiri ihuenyo nke iPhone. Ọfọn, taa anyị ga-ahụ otu ị ga - esi mee ihe a oyiri ihuenyo n'ụzọ dị mfe na-enweghị na-enwe a na kọmputa ọkachamara.
Iji mezuo ihe a ọ dịghị mkpa ime ka ndụ gị sie ike, anyị nwere ụfọdụ nhọrọ dị mfe dịka airplay nke kachasị ndị ọrụ Apple na-ejikarị, mana nke Ọ ezi uche na-adabere ma anyị nwere Apple TV n'ụlọ ma ọ bụ telivishọn dakọtara na teknụzụ a.
Taa, anyị ga-ahụ ụzọ ụfọdụ ị ga-esi kesaa ihuenyo na telivishọn gị site na iPhone mana ọ bụ eziokwu na ihe dị mfe mgbe niile na-agafe airplay. Ọ bụ ya mere anyị ji kwusi ike na ọ bụrụ na ị nwere usoro okike Apple ị họrọ ịzụta Apple TV iji mee nhọrọ a ma ọ bụ chọọ telivishọn dakọtara na ya. Ma ma ọ bụrụ na ịnweghị nke a ma ọ bụ na ịchọghị imefu ego maka Apple TV ị nwere ike iji nhọrọ ndị ọzọ nwere ike ịbụ nke na-adịchaghị ala ma ọ bụ dị mfe iji karịa nke Apple.
1 Olee otú yiri gị iPhone ihuenyo a ileba anya
1.1 Screen Sharing at Kwekọrọ n'Ozizi App Store Apps
1.2 Ngwa ngwaike maka iPhone na enyo na-enyo
1.3 Digital AV nkwụnye na Lightning njikọ
Olee otú yiri gị iPhone ihuenyo a ileba anya
The ụzọ kasị mma dị ka anyị na-ekwu bụ site airplay, n'ihi na nke a ọ dị mfe dị ka swipe ihuenyo ozugbo na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod Touch ala na iPhones na-enweghị Touch ID ma ọ bụ elu na ngwaọrụ ndị okenye nwere bọtịnụ anụ ahụ. ma chọọ maka nhọrọ «oyiri ihuenyo». Omume a na-enye gị ohere ịkekọrịta ọdịnaya ahụ na Apple TV ma ọ bụ na telivishọn ma ozugbo ịpịrị ya, nhọrọ ndị dịnụ dị.
Versionsdị ọhụrụ nke ha na-eme ka nchịkọta nhọrọ dị mfe nghọta ma dịkwa mfe iji. Na foto ndị dị n'okpuru ị nwere ike ịhụ ngwaọrụ ndị m nwere ike ịkekọrịta ihuenyo m n'oge a na nanị site na ịpị ọ bụla n'ime ha anyị ga-akpaghị aka na-ahụ ihe na-egosi na iPhone na telivishọn na ihuenyo.
Ọ bụrụ na enwere obi abụọ, ihe kachasị mma banyere sistemụ a bụ nke ahụ ọ dị oke ọsọ ma dịkwa oke nba ya mere ikesa ihuenyo bu ihe gbasara sekọnd. O doro anya na anyị nwere ụzọ ndị ọzọ mana anyị na-akwado mgbe niile iji Apple maka ịdị mfe nke iji ya na-enye na ogo.
Cheta na usoro dị na iPad ga-ebelata ruo 4/3 nke ihuenyo ahụ na nke ahụ na-emekwa na ngwaọrụ ndị okenye. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ kachasị mfe iji na ngwa ngwa, yabụ Ọ bụrụ na ịkekọrịta ihuenyo ugboro ugboro, anyị na-akwado iji usoro a.
Screen Sharing at Kwekọrọ n'Ozizi App Store Apps
Onye ọ bụla bụ ihe Apple ọrụ na-amaghị na e nwere ngwa na-eme kpomkwem a Screen Sharing nhọrọ. Na nke a ApowerMirror - Mirror & oyiri ngwa bụ otu n'ime ndị na-enye nke a mma. Ọ dị mma na-ekwu na a na ngwa oyiri ihuenyo n'etiti iOS ngwaọrụ na nsụgharị elu ma ọ bụ hà iOS 11.
Ihe ọma banyere ngwa a dịka ọmụmaatụ bụ na ọ na - enye gị ohere ịmefe ekwentị na ekwentị ọzọ site na PC gaa na telivishọn ma tinyekwa kiiboodu, nseta ihuenyo, ndekọ ihuenyo, wdg. ụdị ngwa a ma ọ bụ opekata mpe nke a na-akwado iOS, Android, macOS na nyiwe Windows ya mere ị gaghị enwe nsogbu iji ya n'ime ha.
Iji ya naanị otu ngwa ngwa ebudatara ị ga-eme usoro ndị a:
Jikọọ iPhone na TV na otu netwọk WiFi
Mgbe ahụ, anyị ga-emeghe ngwa ApowerMirror na iPhone
Na iPhone anyị ga-agbanye iji chọpụta TV ma ọ bụ ihuenyo site na nyocha ma ọ bụrụ na anyị chọrọ koodu QR
Anyị na-emeghe Control Center na iPhone wee pịa na nhọrọ "oyiri ihuenyo" họrọ aha telivishọn na ọ bụ ya.
Ọ bụghị na nke a, ngwa ahụ na-enyekwa anyị ohere ịde na ihuenyo nke iPhone ma gosipụta ya na telivishọn na nyocha. Onwe m, anaghị m ejikarị ọtụtụ ngwa nke ụdị a n'ihi "lag" nke ojiji ha mgbe ụfọdụ na-eche. Na nke a ngwa ApowerMirror dị ezigbo mma.
Ngwa ngwaike maka iPhone na enyo na-enyo
Anyị na-ahụkwa na ahịa ụfọdụ ngwaahịa ndị bara uru iji mee ka ihuenyo gosipụtara iPhone anyị ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla na telivishọn. N'okwu a, ọ dị mkpa ịgụ nkọwa ngwaahịa ahụ nke ọma iji nyochaa na ọ dakọtara na nke anyị., ma TV ma ama.
N'ihi nke a, anyị mgbe niile nwere ike ikwu iji ihe Apple TV ịrụ a na ihuenyo mirroring ma ọ bụ Mgbe ịzụrụ TV taa, chọọ nke dakọtara na airplay, n'ụzọ dị otú a ị na-ezere iji ngwa ndị ọzọ ma ọ bụ ngwaike mpụga.
Digital AV nkwụnye na Lightning njikọ
Ahịa anyị na-achọta ọtụtụ eriri na-enye anyị ohere ịme ihuenyo na-enyo site na iPhone gaa na telivishọn. N'echiche a, anyị na-ahụ ọtụtụ ihe nkwụnye ọkụ dijitalụ AV dakọtara na njikọ Lightning nke Apple iPhones.
Na-enyocha ngwa ngwa na ibe weebụ dịka Amazon, anyị na-ahụ dị iche iche metụtara ngwaahịa na Wired ihuenyo nkekọrịta nhọrọ, ebe a n'okpuru anyị ga-ahapụ ihe atụ doro anya:
Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ ngwaahịa dị maka iPhone ihuenyo enyo na-arụ ọrụ site na eriri
Hub a na mgbakwunye na HDMI mmepụta na-enye anyị ohere ịkwụ ụgwọ iPhone site na ọdụ ụgbọ mmiri na-agbakwunye ụdị USB A. Nhọrọ ndị ọzọ anyị nwere, nke ka mma mgbe ị na-ahọrọ ihe ntanetị dijitalụ ọ na-atọkarị ụtọ ịtụle ojiji anyị ga-enye ya. N'okwu a, ọ dị anyị ka ọ bụ ezigbo ngwaahịa maka ndị ọrụ na-eme ụdị mmegharị ihuenyo a na ndị nwere ike ịnwe ngwaọrụ ndị ọzọ karịa nke Apple.
Ọ bụ eziokwu na enwere ngwaahịa dịgasị iche iche mana ị ga-elebara nkọwa ha anya mgbe niile. Dị ka anyị kwugoro ọtụtụ ugboro n'isiokwu a ihe kachasị mma ma dị mfe bụ iji ngwaahịa sitere na otu usoro okike, nke ahụ bụ ịsị Apple, mana ọ bụrụ na ịchọghị, ị maraworị na enwere ụzọ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Olee otú yiri iPhone ihuenyo TV
Gịnị bụ yourphone.exe na-ewepụ ya?